Wararka - Farsamooyinka Warshadaha, Robotyada Halkii ay ku shaqeyn lahaayeen
Qalabyada Warshadaha, Robotyada Halkii ay ku shaqeyn lahaayeen
Shiinaha, halkaasoo kharashka shaqaaluhu kor u kacayo isla markaana ay aad u yaryihiin ilaha aadanaha, aalado ayaa bilaabay in si ballaadhan loogu adeegsado dhinacyo kala duwan, shaqaalaha beddela khadadka waxsoosaarka baallayaashana aalado ayaa sidoo kale laga aqbalaa warshado badan oo caan ah.
Warshad caan ah oo caan ku ah Danmark ayaa saameyn ku yeelatay shirkadda 'Covid-19', shaqaaluhuna ma awoodin inay ku dhammeeyaan culeyska shaqada sidii looga baahnaa iyadoo la shaqeynayo waqti kooban. Tani waxay macaamiisha siisay fikrad ah inay adeegsadaan aalado rooti ah si ay u beddelaan hawlgallada gacanta, iyo adeegsiga qadkan soo-saarka ayaa ku bislaaday Shiinaha oo ay aqoonsadeen macaamiisha.
Waxaan u qaabeynay xalalka meydadka albaabka wax lagu farsameeyo.
Saddexda mashiin waa:
CNC Mashiinka leexinta wejiga seddexaad, si loo xaqiijiyo leexashada saddexda weji flange ee waalka albaabka isla waqtigaas.
Mashiinka Mashiinka Mashiinka Saddex-geesoodka ah ee Horizontal, si loo ogaado qoditaanka saddexda weji ee flange isku mar.
Labo Dhinac Mashiinka Mashiinka Mashiinka CNC, si loo xaqiijiyo farsamaynta isku midka ah ee 5 darajada darajada gudaha jirka.
Robotyadu waxay beddelaan wax soo saarka gacanta si loo kaydiyo kharashaadka shaqaalaha. Isla mar ahaantaana, aalado ayaa ku guuleysan kara howl-gal 24-saac ah, oo u baahan kaliya hal aalado si ay u ilaaliso saddex mashiin. Intaas waxaa sii dheer, qaabka soosaarka khadka tooska ah ee isku-dhafka ayaa badbaadin kara meel badan, ka dhigaysa qorsheynta warshaddu mid aad u tiro badan, iyo keydinta qiimaha ilaha dhulka.